Sheep - yizilwane ezinikeza inqwaba imikhiqizo, kuhlanganise inyama, uwoyela, isikhumba, amafutha. Hlukanisa kahle uvolo, emihle lulwimi kanye indawo uvolo izinhlobo zezilwane. Phakathi kwabo, iqembu ahlukene labelwe Merino uvolo okuyinto unezimfanelo ekhethekile.
Kukholakala ukuthi uhlobo izinkomo Merino kulendawo uvele ngaphambi BC 2-3 ekhulwini e -Asia Minor, ke wahamba lapho lasakazekela West. Ekuqaleni kwekhulu lama-20 zohlobo phathelana osakazwa kabanzi e-Australia kuze kube yilolu uvolo Merino okwenza ukuba kukhiqizwe izinhlobo materials abachwepheshile, siye ezifuywa ngempumelelo e-Europe. Ngo-USSR, zohlobo yasungulwa ngesisekelo amasampula zendawo amazwe, ofanele kakhulu ukusetshenziswa ezindaweni ezihlukahlukene zezwe.
Ochwepheshe Soviet Ubude kwaletha zinhlobo ezahlukene idazini, phakathi lapho Sales eyaziwa kakhulu, laseStavropol, Askanian, Soviet Merino, zaseCaucasia, yama-Altaic nabanye. Zonke izilwane zofuzo ifakwe ihlanganisa nezici ezithile ukuze isitokwe ezengeziwe esikhumbeni entanyeni (ngesimo pleats eziningana ulenga).
Uvolo Merino imvu-Waphawuleka kulencane kwesigaba wesi- (fineness) izinwele lapho, ngokuhambisana ngezigaba akufanele abangaphezu kuka-25 micrometer. Ngamunye the izinhlobo ngenhla lesi sibalo ezahlukene. Ngokwesibonelo, iSoviet Merino unika ogxile a fineness ka 20-23 microns (18-20 microns ngaphansi) kanye Salskaya zohlobo - ngokuvamile 20-25 microns. Ngaphezu kwalokho, lapho ekuhloleni izinga eluhlaza uvolo Bheka ukuthi abanye amandla, crimp, ukushintsha-shintsha, extensibility, abanye akhanye, umbala kanye umswakama kuyo anazo. Futhi sebuhlaziyiwe suint umbala.
Merino uvolo, ukubuyekezwa esiphila ngokungaqondile ezakha yena ngokuthenga, isibonelo, eliphezulu knitwear, nayo zihlukaniswa i obuphelele enviable siqu. Ngokwesibonelo, imvu Salskaya amatshe ngesikhathi wayegunda ukulungele eziyisisekelo uboya ubude mayelana 8 cm, ne nezinqama -. Cishe 9cm Qaphela ukuthi abantu besilisa cishe njalo etholwe ijazi ubude, kanti i isivuno ephakeme of inyama (liveweight ngaphambi ekuhlatshweni ongafinyelela khilogremu 100 noma ngaphezulu).
Kukangaki bafa Merino? Elingenamikhono le ndawo yamadwala eqoqwe eyisamba, ngo-Ephreli-May, lapho umoya efudumele ngokwanele ukuvumela nezilwane bangena "jazi noboya." Akulungile ukuthi zonke impahla eluhlaza ine izimfanelo oshiwo ngenhla esiyingqayizivele. Uvolo engcono etholwe kuphela kusukela ingxenye emuva, intamo, izinhlangothi namathanga isilwane ngasinye. Hlela isandla sakhe izinto zokusetshenziswa etholwe ebeleni, imilenze, ikhanda, futhi equliswa kucutshungulwe. Isivuno isilinganiso okumsulwa Merino uvolo idwala imayelana 42-50 amaphesenti.
Lapho eRussia namuhla indlela etshalwa ikakhulu Merino? Noboya lezi zilwane in the Ephakathi futhi Lower iVolga, ezindaweni asemaqeleni of eCaucasus, eningizimu eSiberia. Emazweni ayengaphansi Merino Soviet imvu ithuthukiswe Ukraine, Kyrgyzstan, Kazakhstan, kwezinye izindawo eCaucasus. Abaholi balezi inani eliphelele nezimvu izinkomba ezahlukene namuhla China, Australia naseNdiya.
Abasakazeli bamanyolo wamaminerali
Inhlanzi zizalela ekhaya - i ibhizinisi ezithakazelisayo futhi inzuzo
Izinkukhu oats. Kugcinwa futhi zizalela izikhukhukazi
Osiris - unkulunkulu waseGibhithe lasendulo. Image futhi uphawu unkulunkulu u-Osiris
Kuyini yena, i-African intombazane ubuhle?
Imithetho Parking emagcekeni emizi. iziqondiso yokupaka, imithetho yomgwaqo. Yokupaka egcekeni elingaphansi kwesakhiwo sokuhlala
Iqiniso LaseRussia I-Yaroslav Ihlakaniphile
Izifunda zomasipala eMoscow, County kanye nomasipala